Koox Burcad Koofur Afrikaan ah oo dishay Ganacsade Soomaali…
Koofur Afrika Oo Saacado Kooban Laga Diiwaangeliay 150-kiis…
Magaalada Cape Town ee dalka Koofur Afirka waxaa lagu dilay Marxuum Cabdulaahi Ganey Gadafo oo ahaa Ganacsade Soomaaliyeed, kadib markii Koox burcad hubeysan ay ugu tagtay goobtiisa.
Qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Dalka Koofur Afrika ayaa Axadle u sheegay in Marxuum Cabdullaahi xiligii la dilayay uu ku sugnaa goobtiisa ganacsiga oo ku taalla Laanta (Side B) oo kamid ah goobaha Dukaamada ay ku leeyihiin Soomaalida.
Ciidamada Booliiska oo maqlay falkaan ayaa goobta tagay, waxa ay sameeyeen baaritaanno kooban, Warbixin ayay ka qoreen qaar kamid ah dadkii goobta ka dhawaa, kadib waa ay isaga tageen.
Dilalka Ajaaniibta oo ay qayb ka tahay Soomaalida ayaa kusii kordheysa dalka Koofur Afrika, todobaadkii lasoo dhaafay muwaadin Soomaaliyeed waxaa dishay koox burcad ah oo dooneysay in ay dhacaan goobtiisa.
Bishii lasoo dhaafay waxaa la diiwaangeliyay kiisaskii ugu badnaa oo dilal ah oo loo geystay Dhalinyarada Soomaaliyeed ee Goobaha Ganacsiga ku leh Dalka Magaalooyinka kala duwan ee Koofur Afrika.
Maxkamad ku taalla Dalka Koofur Afrika waxa ay dhawaan xukun ku ridday muwaadin u dhashay dalkaas oo lagu helay dil bareer ah uu u geystay Ganacsade Soomaaliyeed, kadib markii gacanta lagu dhigay isaga oo dhaawac ah.